Indlu yama-prism olwandle - I-Airbnb
Indlu yama-prism olwandle
Torre di Mezzo, Sicilia, i-Italy
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Sandra
Indlu esemaweni eTorre di Mezzo, eRagusa
I-villa itholakala eningizimu-mpumalanga yogu lweRagusa amamitha ambalwa ukusuka olwandle, eduze nencithakalo yombhoshongo wokuvikela ogwini lapho idolobha liqanjwe khona.
Ngezansi kwendlu kukhona "i-cove" yasendle futhi yodwa yamadwala.
I-solarium esophahleni iyindawo yokubuka, evulekile ngo-180 ° olwandle lwaseMedithera nasesibhakabhakeni.
Isici esiyingqayizivele yileso sokuzizwa "umisiwe phakathi kwesibhakabhaka nolwandle".
Incazelo: Ihlukile ngohlobo lwayo ngesikhundla nekhwalithi yokusabalalisa yezindawo. Ishicilelwe ku-"L 'Architettura Cronache e Storia" kusukela ngo-1984 / n ° 4. Yakhelwe ngeminyaka yama-70s kuphrojekthi kamakhi uVincenzo Gianna yomndeni wakhe omkhulu.
Kusatshalaliswe kumazinga ama-2 endaweni engamamitha-skwele angama-240. Phansi phansi isethi yekhishi, indawo yokudlela neyokuhlala. Amakamelo amabili esevisi anamathiselwe ekhishini: Igumbi lokuwasha elinendlu yangasese kanye ne-pantry / igumbi lokugcina.
Ikhishi likhulu futhi lisebenza kahle elinama-burners angu-5 kanye ne-oven yegesi enegrill kagesi, igumbi lokudlela limelela inhliziyo yendlu netafula layo elikhulu lamatshe elimbozwe nge-ocher ephuzi kanye namathayili anemibala eluhlaza.
Amakamelo okulala amathathu atholakala esitezi esiphansi, amabili awo anamagumbi okugezela kanye negumbi elilodwa lokulala elinendawo yokugezela yenkonzo enamathiselwe.
Isitezi sokuqala singenwa yizitebhisi ezibekwe phakathi kwegumbi lokuphumula nendlu yokudlela; i-balcony ebheke endaweni yokuhlala ixhuma amagumbi okulala amathathu negumbi lokugezela elinezindlu zangasese, i-bidet kanye nosinki.
Ngaphandle kuneshawa embozwe entofontofo.Wonke amakamelo anendawo engaphandle kokubili esitezi esiphansi nasesitezi sokuqala. Impahla yesimanje futhi ibalulekile ngesitayela saseMedithera esiphelele.
Indlu ngaphandle izungezwe amathala ahlala ngezikhathi ezahlukene zosuku. Ungadla isidlo sasekuseni noma isidlo sakusihlwa ngaphandle ubheke ulwandle. Uzoba ne-barbecue ngaphansi kwe-pergola.
Indlu ilungele umndeni owodwa noma ngaphezulu noma amaqembu abangani noma nje kulabo abathanda ulwandle, ukubhukuda noma ukuhlola ulwandle oluhle kakhulu ngaphansi kwendlu, bevakashela izindawo eziseduze ezinomlando oqhelile futhi omangalisayo owenziwe ngezinsalela zemivubukulo, amanxiwa, imibhoshongo. yemilindankosi, okuyinto ichashazi ogwini.
Ifanele labo abathanda ukuziphekela bona noma abanye, ukuhlangana ndawonye, ukuhlangana ndawonye eduze kwetafula.
Nakanjani indawo efanelekile kulabo abafuna ukubalekela ukucindezeleka kwansuku zonke futhi bathole ukuthula nokuthula, bahogele ulwandle, baphumule.
I-Torre di Mezzo iyindawo yolwandle egcwele abantu abaningi kunePunta Secca nePunta Braccetto eseduze lapho iqhele ngamakhilomitha angu-2 kuphela, ngokuba "maphakathi".
Ugu olukule ngxenye yesiqhingi lubonakala lunamadwala ngezinye izikhathi bese luzaca luze lube amachibi asodwa noma amabhishi anesihlabathi avame ukuvakashelwa futhi alungele izingane.
Phezulu kwenxiwa lombhoshongo obonayo oxhumana ngokubonakalayo neminye imibhoshongo emibili empumalanga iTorre Scalambri yasePunta Secca nasentshonalanga iTorre Vigliena yasePunta Braccetto.
Indawo ilungele labo abafuna ukuxhumana nolwandle.
Ungangithinta ngaphambi kokuhlala kwakho.
Uma ufika mina nodadewethu sizobe sikhona lapho kulethwa okhiye kanye nokuyongena.
Ngesikhathi sokuhlala kwakho, uma kunesidingo, ungaxhumana nathi.
Hlola ezinye izinketho ezise- Torre di Mezzo namaphethelo